Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Sidney oo shir soo dhaweyn iyo xogwaran ah isugu timid shalay
Jaaliyadda Sidney oo shir soo dhaweyn iyo xogwaran ah isugu timid shalay
Waxaa maalinimadii shalay oo ay taariikhdu ahayd 31/03/12 ka dhacay magaalada Sydney shir ay isugu yimadeen dhamaan qaybaha ay ka kooban tahay Jaaliyada Somaalida Ogaadeenya ee ku dhaqan magaalada Sydney ee wadanka Australia.
Shirkan oo lagu soo dhaweeynayay laguna xog warsanayay hogaanka arimaha dibada ee ONLF Halgame C/raxmaan Maadeey ayaa lagu furay aayadaha quraanka oo uu akhriyay Sheekh Maxamed Macalin iyadoo kadibna lagu soo dhaweeyay Gudoomiye ku xigeenka JWXO Mudane Maxamed Ismaaciil Cumar oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Sidney ayaa halkaas kasoo jeediyay warbixin ku saabsan heerka halganku marayo, waayaha dadka Ogaadeenya ku sugan yahay iyo dardaaran uu usoo jeediyay jaaliyadda.
Intaas kadib ayaa waxaa hadalka lagusoo dhaweeyay Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO mudane C/raxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo halkaas kasoo jeediyay warbixin mug wayn oo ka hadlaysay taariikhdii halganka, iyo guulaha siyaasadeed iyo diblamaasiyadeed ee uu halganku gaadhay isagoo sidoo kale hogaanku ku muujiyay warbixntiisa sida dhulka Ogaadeenya barwaaqo u yahay una leeyahay khayraadka aduunka loogu jecel yahay hadana ay uga baahana yihiin dadkii lahaa iyagoo sanad walba tiro aad u badani u dhimato gaajo iyo cuduro la xidhiidha gaajada.
Halgame C/raxmaan ayaa soo bandhidigida warbixntiisa u isticmaalay aalada casriga ah isagoo kasoo qayb galayaashii ku tusay halkaas maqal iyo muuqaal lasoo habeeyay oo muujinayay khayraadka dalka iyo macaluusha dadka ku haysata Ogaadeenya. Waxaa kale oo uu soo bandhigay cududa Ciidanka Xoraynta Ogaadeenya.
Warbixintaas kadib ayaa dadka loo furay wixii su’aal iyo talobxin ah ee ay u hayaan madaxda jabhada iyadoo ay masuuliyiinta JWXO si lagu qancay uga jawaabeen dhamaan su’aalihii la waydiiyay.
Gunaanadkii ayaa waxaa wacdi xeel dheer kasoo jeediyay shirka Sheekh Maxamed Macalin oo dadkii meesha yimid kula dardaarmay in ay taageeraan halganka lagu xoraynayo dalkooda iyo dadkooda.
Marka la iskusoo wada duubo shirkii Sydney ee ay ku kulmeen madaxda Jabhada iyo Jaaliya Sydney ayaa ahaa mid aad loogu bogay sida uu u qabsoomay iyo sida loo kala warqaatay.